Nanoleaf Canvas, qurxin iyo utility oo loo siman yahay qaybaha | Wararka IPhone
Nalalka casriga ahi waxay ku sii badan yihiin geesaha gurigeenna, inay iftiimiso qol, inay abuurto jawi dabacsan inta aan wax ka akhrinayno ama ku raaxaysanayno filimkeenna aannu ugu jecel nahay, ama ujeeddooyin qurxin oo keliya. Nanoleaf wuxuu na siiyaa nidaam nalalka oo isku keena dhowr ka mid ah ujeeddooyinkan hal aalad, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan xakameyno deegaankeena HomeKit iyada oo ay ugu mahadcelinayaan alwaaxyada taabashada.
Waxaan falanqeyneynaa Nanoleaf Canvas Starter Kit, nidaam ka kooban sagaal alwaax taabasho iftiin leh iyo wax kasta oo lagama maarmaan u ah rakibideeda, leh nal go'an, firfircoon, ilaa laxanka muusikada iyo aqoonsiga tilmaamaha taabashada xakamaynta Nanoleaf Canvas laftiisa iyo aaladaha kale ee HomeKit.
1 Xidhmo bilow ah oo dhameystiran
2 Rakibo Aad u fudud
3 Alexa, Kaaliyaha Google iyo HomeKit
4 Xakamaynta taabashada
Xidhmo bilow ah oo dhameystiran
"Qalabka Bilowga" wuxuu ka kooban yahay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u rakibto sagaalka nal ee lagu daray. Transformer ku siin doona awood (ilaa labaatan baal), Kooladaha si loogu dhejiyo derbiga ama dusha sare ee dusha sare iyo isku xirayaasha u adeega inay ku biiraan qaybaha kala duwan oo ay ku siiyaan awood. Uma baahnid wax kale oo loogu talagalay rakibidda nidaamka, maahan hal qalab.
Dhamaan kumbuyuutarradu waa isku mid marka laga reebo mid, kaas oo ah xakamaynta nidaamka. Si fudud ayaa loo aqoonsan karaa maxaa yeelay waxaa ku jira xoogaa kontaroolada taabashada mid ka mid ah geesaha iyo sidoo kale istiikar sharaxaya kontarooladaas. Guddi gaar ah ayaa ah midka xukuma dhammaan nidaamka nalalka, wuxuuna awood u leeyahay inuu maareeyo illaa 500 oo albaab. Sababtoo ah nidaamkani waa mid la ballaarin karo adoo iibsanaya dhammaan dariiqyada dheeriga ah ee aad rabto, iyada oo la tixgelinayo xaddidaadahaas: 20 halkii transform, 500 halkii koontaroole
Rakibo Aad u fudud
Markuu qofku wajaho mid ka mid ah xirmooyinkaan, waxaa badanaa lagu sameeyaa xoogaa cabsi ah, laakiin waxba run ugama sii dheereyn karaan. Marka lagu daro xaqiiqda ah in nidaamka dhejinta uu yahay mid aad u fudud mahadnaqidda isku xirayaasha iyo xabagta, waxaan haynaa caawinta weyn ee barnaamijka Nanoleaf oo aan ku heli karno App Store bilaash ah (isku xirka). Waad ku mahadsan tahay adeegsiga Xaqiiqada Dareenka waxaan ku abuuri karnaa naqshadeynta iPhone-ka oo aan arki karnaa sida ay u muuqato iyadoo la adeegsanayo kaameradda
Laba talo oo loogu talagalay samee naqshado badan, ha ku dhajin midka hore, eeg sida ay tahay aagga aad aadeyso, ka dibna go'aanso. Markaad horay u go'aansatay golaha, marka hore dhig kontoroolka, ku xir tarjumaanka si uu u daarmayo, ka dibna u sii wad dhigista darbiyada, oo leh nidaamka, si aad u hubiso in wax waliba ay si sax ah u dhegen yihiin kor, adigoo iska ilaalinaya inaad dib u dhigto mid ka mid ah sababtoo ah isku xiraha si fiican uma aadan dhigin.
Alexa, Kaaliyaha Google iyo HomeKit
Waxaan ku xakameyn karnaa Nanoleaf light light iyada oo loo marayo saddexda caawiye ee ugu muhiimsan. Is dhexgalka HomeKit waa dhameystiran yahay waxaana loo qaabeeyey si la mid ah nal kasta oo casri ah, ka dib skaanka ku habboon ee QR code kaas oo ku jira tarjumaha iyo buugta tilmaamaha. Codsiga Guriga waxaan u isticmaali karnaa sida nal kasta oo kale oo beddela midabada, waxaan ku dari karnaa bey'adaha, otomaatiyada, iwm. Laakiin ma awoodi doonno inaan adeegsanno howlaha midabbada badan leh, maahan animations-ka ama howlaha "Rythm" ee ka dhigaya inuu midabka u beddelo laxanka muusikada.
Waxaas oo dhan waxaa jira codsi Nanoleaf ah, oo aan ku habeyn karno tiro aan dhammaad lahayn oo isku dhafan oo midab ah, ama aan ku dhejin karno hal midab, abuur animations ama soo dejiso dhammaan hal-abuurka ay isticmaaleyaasha kale ee Nanoleaf ay ku soo rogeen arjiga, iyo waxaas oo dhan gabi ahaanba waa lacag la'aan. Waxaa jira wax loogu talagalay dhadhanka oo dhan, laga bilaabo nasashada nalalka jawiga leh iyo animations-ka diskooga Marka lagu daro xakamaynta darfaha arjiga, waxaad ku sameyn kartaa qeybta guud, oo leh badhamada taabashada oo ku siinaya suurtagalnimada inaad si deg deg ah u hesho howlaha kala duwan.
Nanoleaf sidoo kale waxay ku xalisaa qaab hal abuur leh xaddidaadda arjiga Guriga, iyadoo u abuureysa jawi kasta oo ka mid ah halabuurka aad rabto. Sidan ayaad ku xakameyn kartaa nalalka barnaamijka Home, iyada oo loo marayo Siri ee ku saabsan iPhone-kaaga ama HomePod. Jawi loogu talagalay midab kasta oo isku dhafan ama animation iyo mushkilad la xalliyo.
Laakiin shaki la'aan waxa ugu yaabka badan ee ku saabsan Nanoleaf Canvas waa suurtagalnimada in la xakameeyo iyada oo la taabto guddi kasta. Waxaad ku maamuli kartaa dhalaalka adigoo gacantaada ku dulfuulaya darfaha, waadna xakamayn kartaa aaladda lafteeda iyo qalab kasta oo kale oo aad ku haysato HomeKit adoo gujinaya guddi kasta Mid kasta oo ka mid ah xayndaabyada nidaamkan ayaa ah badhan la habeyn karo oo lagu xakameyn karo HomeKit, oo leh seddex tallaabo oo guddi kasta ah: mid taabasho, laba taabasho, iyo mid taabasho dheer. Ku dhufo saddexdaas tilmaam dhamaan kumbuyuutareedka waxaadna arki doontaa in fursadaha ay bixiso Kanano Nanoleaf ay yihiin kuwo aad u weyn. Ma rabtaa inaad shido nalka qolka fadhiga? Nalalka oo dhan damiya? Gali jawi jaceyl? Abuur nalalka ugu fiican ee akhriska? Hagaag, waxaas oo dhan waxaa lagu sameyn karaa Kanadkan Nanoleaf.
Nanoleaf waxay abuurtay nidaam nal oo ka bixi kara xarrago iyo xad-gudub, laga bilaabo nasasho illaa kicin, iyo qurxin illaa ilbiriqsi. Kala duwanaanshaha Nanoleaf Canvas wuxuu ka dhigayaa qalabka loo yaqaan 'HomeKit' oo aan aad ula yaabay hadda, maxaa yeelay waxay aad uga badan tahay uun qurxinta darbiga. Hadday kaliya shaqadan lahayd, qiimaheedu waa € 196 gudaha Amazon Waxaan ka dhigi lahaa iska indhatir qaali ah, laakiin dhammaan fursadaha ay bixiso, waa qalab taas Waxay ka dhigi doontaa qof walba oo ku nool adduunka HomeKit jacayl.
Rakibaadda iyo maaraynta fudud
Suurtagalnimada ballaadhinta aan xadidnayn
Hawlaha taabto si aad u maamusho jawiga HomeKit
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Nanoleaf Canvas, qurxinta iyo adeegga guud ee isla eg
iFixit waxay horey gacanta ugu haysaa Apple Watch Series 5 cusub
tvOS 13 waxaa hada lagu heli karaa Apple Arcade iyo inbadan